के तपाई हात्ती हुनुहुन्छ वा पुतली? | Martech Zone
मङ्गलबार, डिसेम्बर 15, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
सोमबार मैले राष्ट्रपति, रोजर विलियम्ससँग भेट गरे आपतकालिन नेतृत्व संस्थान। नाफा नफाको साथ भेट गर्नु सँधै प्रेरणादायक हुन्छ ... रोजरले हेल्प ईन्डी अनलाइन निर्माण गरेर क्षेत्र परिवर्तन गरेको छ - जुन युवा समुदायलाई सेवामा सामेल गराउँदछ। उसको अनलाइन प्रणाली र सोशल मिडियाको प्रयोग अविश्वसनीय छ। साथै, आफ्नो कार्यक्रम मा आरआईआई घातीय छ।
रोजरले मलाई मन परिरहेको समानता साझा गरे, उनले सोधे "के तपाई हात्ती वा पुतली हुनुहुन्छ?? "
दुबै हात्ती र पुतली अविस्मरणीय छन् तर तिनीहरूको फरक भिन्नता छ।
An हात्ती सँधै सुन्दरको रूपमा चिनिदैन। हात्ती थोरै बेचिलो हुन्छ, फोहोर हुन्छ यसले माटोबाट हिडछ, एक निशान छोड्छ र जहाँ बस्छ जहाँ आफ्नो छाप छोड्दछ। हात्तीहरु भारी उठाने गर्न को लागी गर्न सक्षम छन् र संगठनहरु अगाडि बढ्न।
पुतलीहरु सुन्दर छन्। तिनीहरू हावाका साथ बोकेका छन्, कुनै छाप छोड्नुहोस्, र ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राम्ररी उडान गर्नुहोस्। यदि तिनीहरू माटोमा उत्रिए भने तिनीहरू गन्दैनन् पनि।
परामर्शदाताको रूपमा, मेरो काम भनेको कम्पनीहरू परिवर्तन गर्नु हो जुन मैले राम्रोसँग काम गरें। म पुतली हुन सक्दिन, म हात्ती हुनै पर्छ। यदि मैले मेरा ग्राहकहरूको लागि नतिजा प्राप्त गरेन भने म सफल हुन सक्दिन र अन्ततः व्यापार हराउनेछ। यदि मेरा ग्राहकहरूले मेरो कुरा सुन्दैनन्, म अर्को ग्राहकमा फडफडाउन सक्दिन ... म फोहोरमा पर्नु पर्छ र मेरो छाप बनाउनु पर्छ।
म सँधै हात्ती हुँ [यहाँ अधिक वजनको मजाक सम्मिलित गर्नुहोस् ...], कहिलेकाहिँ गल्ती गर्न। यद्यपि, म को हुँ भनेर सहज छ र मैले काम गरेको संगठनहरूसँग गरेको भिन्नताहरू चिन्छु। मलाई हात्ती हुन मन पर्छ। त्यसोभए तपाईं के हुनुहुन्छ?
तपाईं एक हुनुहुन्छ हात्ती वा पुतली?
टैग: कल्ट्सकार्यक्रम मार्केटिंगgmमार्केटिंग खोज्नुहोस्ustream